Apple inomira kusaina iOS 10.3.2 | IPhone nhau
Apple inomira kusaina iOS 10.3.2
Apple inoramba ichimira kusaina shanduro dzekare dze firmware yemidziyo yayo nhare mavhiki mashoma mushure mekuburitsa vhezheni nyowani. Asi panguva ino Cupertino vakomana vatora mavhiki matatu kubvira ichaburitsa iOS 10.3.3 iyo vhezheni iri kusainwa naApple parizvino, kana tichida kudzoreredza mudziyo wedu tisina dambudziko nazvo.
Kusvikira maawa mashoma apfuura, Apple yaizotibvumidza isu kuisa ese iOS 10.3.2 uye iOS 10.3.3. Icho chete chinangwa chekuisa iOS 10.3.2 chingave chiri chekuti jailbreak inozooneka iyi vhezheni yeIOS, chimwe chinhu icho kukwirira kwegore ratinozviwana tiri hazvigoneki.
Kune vashandisi vemazuva ano vevasungwa, idzi nhau hadzina kufarira, sezvo ichangoburwa yepamutemo jailbreak ndiyo yakaburitswa naYalu uye inongowirirana nemidziyo yese kusvika kune iOS 10.2, asi inoratidza Kuedza kweApple kuverengera kuti munhu wese ave nechavo mudziyo kuvandudzwa kune yazvino vhezheni, zviripachena sekureba sekunge iwe usiri kuda kusiya iyo jailbreak, kupunzika kwejeri kwakawedzera kuve chinhu chechishuwo chiri kunetsa kuwana.
Kana iwe uri vashandisi veIOS 10.3.2 uye iwe usina chinangwa chekumisikidza kuIOS 10.3.3 kana nyere ikarira uye boka revabiridzi rikatanga jailbreak, unofanira kungwarira nezviziviso zvinotumirwa neIOS kuchinhu, kutipa mukana wekugona kuita kumisikidza mumaawa atisingashandise mudziyo wedundokuti, mambakwedza. Chinhu chakanakisa chatingaite kuenda kunowanikwa iko kunonyorera maficha mukati meMagadziriso - General uye bvisa iyo yekudzokorora iyo ichave yatora pasi uye iri kungomirira kutanga kuiisa.
Asi sekutaura kwandakaita, hazvigoneke kuti panguva ino jailbreak inogona kuoneka iOS 10.3.2, asi zvinhu zvakasimba izvo vavaki vanogona kutiunzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inomira kusaina iOS 10.3.2
Tenda Mwari, nekuti jira ravanga vachigadzira kubvira iOS 10.2 .... nerombo rakanaka neIOS 10.3.3 iko kugadzikana kwekusimudzira kunoonekwa uye ikozvino yangu iPhone yakaita kunge mwedzi mishoma yapfuura.
IKEA inogadziridza ayo akangwara mabumba kuti avatsigire neKeKKit [Gadziridza: Kwete izvozvi]
OneDrive inowana hukuru hukuru nekuwedzera gwaro scanner